आँखाको दृष्टि पर्दाको रोग के हो? कस्ता व्यक्तिहरु उच्च जोखिममा? पर्दाका रोगहरु विभिन्न कारणले हुन सक्छ। जस्तै, वंशाणुगत, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उमेरको कारणले, भिटामिन एको कमी, समय नपुगी जन्मेका नवजात शिशुहरु, आँखामा चोटपटक लागेर आदि। शनिबार, वैशाख १७, २०७९
गर्मीमा तातो हावा तथा लुबाट जोगिने उपायहरु गर्मी महिना लागेसँगै तातो हावा वा लु बढ्ने जोखिम धेरै रहेको पाइन्छ। गर्मीमा स्वास्थ्यको विशेष हेरचार गर्न आवश्यक छ। बुधबार, वैशाख १४, २०७९
मुख गन्हाउने कारण र कम गर्ने घरेलु उपाय झट्ट हेर्दा सामान्य देखिएपनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताईरहेको हुन्छ। यहीकारण साथीभाईबीच मात्र नभई पति पत्नीबीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छन्, मानिसलाई लाजमर्नु बनाउछ मुखको दुर्गन्धले। मंगलबार, वैशाख १३, २०७९
औलोका ६ लक्षण र बच्ने उपाय औलोको शंका लागेमा रगत परीक्षण गरी औलो भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ। सरकार मातहतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा औलोको परीक्षण तथा उपचार नि:शुल्क छ। सोमबार, वैशाख १२, २०७९
आँखाको दृष्टि असामान्य भएको कसरी छुट्याउने? यस्ता छन् ९ लक्षण निम्न लक्षणहरु देखिएमा आँखाको दृष्टि असामान्य भएको बुझनु पर्छ र तुरुन्त आँखा अस्पताल पठाउनु पर्छ। - नयाँ ठाउँमा हिड्न कठिन हुनु वा हिड्दा यत्र तत्र ठोकिँदै हिड्नु। - बस्तु छोएर वा छामेर पहिचान गर्न खोज्नु। बिहीबार, वैशाख ८, २०७९
यी हुन् बच्चालाई चाहिने पौष्टिक तत्व आजकाल वयस्कमा देखिने रोग पनि साना बालबालिकामा पनि देखिन थालेको छ। सानै उमेरमा मधुुमेहजस्ता रोगबाट बालबालिका पीडित हुन थालेका छन्। यसको प्रमुख कारण हो, बालबालिकाको खानपान र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन। बिहीबार, वैशाख ८, २०७९
यस्ता छन् कपाल झर्ने १२ कारण न्युयोर्कका छालारोग विशेषज्ञ डा. मार्क ग्लासोफर भन्छन्, ‘जब तपाईं साँच्चिकै तनावमा हुनुहुन्छ भने यसले कपालको चक्रलाई असर गर्छ र झर्ने अवस्थामा पुग्छ।’ गम्भीर अवस्थाको तीन देखि ६ महिनासम्म कपाल झर्छ। बुधबार, वैशाख ७, २०७९
बिरामी वा आफन्तले डाक्टरलाई सोध्नैपर्ने ४५ प्रश्न आफूले सेवन गरिरहेको औषधिको नाम सम्झनुहुन्न भने लेखेर चिकित्सककहाँ जानु राम्रो हुन्छ। यदि त्यो पनि सम्भव नभए खोलसहित औषधिको नमूना लैजाँदा उत्तम हुन्छ। मंगलबार, वैशाख ६, २०७९
यस्ता छन् जिब्रोमा देखिने ४ समस्या जिब्रोको मुख्य कार्य स्वाद लिनु हो। तर, जिब्रोले मानिसको स्वास्थ्यका बारेमा पनि बताइरहेको हुन्छ। यदि जिब्रो स्वस्थ छैन भने त्यसले स्वास्थ्यमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ। सोमबार, वैशाख ५, २०७९
दाँत स्वास्थ्य सम्बन्धी केही गलत धारणा र दाँत सफा गर्ने सही तरिका दाँत तथा मुखको समस्या शरीरका अन्य रोग जस्तै प्रमुख १० रोगको रुपमा लिने गरिन्छ। आइतबार, वैशाख ४, २०७९
नयाँ वर्षसँगै स्वस्थ रहन यी २३ संकल्प पूरा गरौं विभिन्न विज्ञहरूले दिएको सुझावका आधारमा यहाँ केही यस्ता संकल्पहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जो वास्तवमै हामीले व्यवहारमा लागू गर्न सक्छौँ अनि पूरा पनिः बिहीबार, वैशाख १, २०७९
यी हुन् सही समयमा पानी पिउनुका फाइदा हरेक दिन ३ देखि ४ लिटर पानी पिउने गर्नु शरीरको लागि राम्रो हुने तिकित्सकहरु बताउँछन्। तर पानी कति बेला र कति खाने त्यो भने जान्नुपर्छ। बुधबार, चैत ३०, २०७८
शरीरलाई किन आवश्यक छ भिटामिन ई? कमी हुँदा कस्ता समस्या आउँछन्? अधिकांश मानिस यसलाई ‘ब्युटी भिटामिन’ को रुपमा सम्झन्छन्। यसले छाला र कपाल सन्दर बनाउने भएकाले भिटामिन ई आवश्यक ठानिन्छ। तर यतिमात्र होइन। भिटामिन ई प्रतिरोधी प्रणाली र मस्तिष्कको स्वास्थ्यलगायतका लागि पनि आवश्यक हुन्छ। सोमबार, चैत २८, २०७८
पार्किन्सन्स के हो? लक्षण के-के हुन्? त्यसैले माथिका जस्तै पार्किनसन्स रोगको केही लक्षण देखेमा नजिकैको अस्पताल लैजाऊ ,समयमै रोगको पहिचान गरौं र निःशुल्क उपचार गरौं l सोमबार, चैत २८, २०७८
यी हुन् मेटाबोलिज्म बढाउने १० घरेलु उपाय मेटाबोलिज्मलाई सजिलो हिसाबले बुझ्नुपर्दा यो पेटद्वारा खाना पचाउने गति भन्ने बुझिन्छ। मेटाबोलिज्ममा समस्या आउनु पेटमा समस्या आउनु हो। धिमा मेटाबोलिज्म अर्थात् स्लो मेटाबोलिजम हुँदा भोक लाग्दैन, खाना सही रुपमा पच्दैन र कब्जियतको समस्या हुन्छ। आइतबार, चैत २७, २०७८
ढाड दुखिरहन्छ? यसो गर्नुहोस् विज्ञहरुका अनुसार ढाड दुख्नुका विभिन्न कारणहरु भए पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण भने गलत आसनमा बस्नु नै हो। यसको अर्थ तपाईंले उभिदा वा बस्दा राम्रो आसन ग्रहण गर्न सक्नुभयो भने ढाड र घाँटी दुःख्ने समस्या लगायतबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ। शनिबार, चैत २६, २०७८
किन तातो हुन्छ बालबालिकाको निधार? साना बच्चाहरुको प्रतिरोधी प्रणाली ठूलो मानिसको तुलनामा कमजोर हुन्छ। उनीहरुलाई चाँडै चिसो लाग्छ, चाँडै संक्रमण सर्छ र रुघाखोकी पनि चाँडै लाग्छ। शुक्रबार, चैत २५, २०७८
स्मरण शक्ति घटाउने यी ७ खराब व्यवहार मान्छे तनावमुक्त हुन सक्दैन। तर, तनाव उत्पन्न गराउने केही कुराबाट सचेत हुन सक्यो भने स्मरणशक्ति घट्नबाट जोगिन सकिन्छ। स्मरण शक्ति घटाउने केही तत्वहरु यसप्रकार छन्। मंगलबार, चैत २२, २०७८
जिब्रोमा देखिने यी तीन समस्याले रोग पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ डाक्टरले बिरामी जाँच्दा सबैभन्दा पहिले जिब्रो हेर्नु पनि यहीकारण हो। जिब्रोका आधारमा कुनै रोगको अनुमान गरिरहेका हुन्छन् डाक्टरहरु। मंगलबार, चैत २२, २०७८
धूम्रपान गर्नुहुन्छ? थाहा पाउनुहोस् यी चार असर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार धुम्रपानले हामीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाउँछ। धुम्रपान गर्ने व्यक्तिमा फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। आइतबार, चैत २०, २०७८
‘फिट एन्ड फाइन’ रहन गर्नुपर्ने सामान्य ९ कुरा स्लिम र आकर्षक हुन खाना खान छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। केही कुरामा ध्यान दिए शरीरलाई ‘फिट एन्ड फाइन’ राख्न सकिन्छ। शनिबार, चैत १९, २०७८
खाएको पच्दैन? यसो गर्नुहोस् पुदिना, धनियाँ, हरियो खुर्सानी, अदुवा, कागतीको रस आदि मिसाएर बनाएको ताजा अचार खानासँग खाने गर्नाले पाचनशक्ति बलियो हुन्छ। बिहीबार, चैत १७, २०७८
राति बत्ती बालेर सुत्नुहुन्छ? स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ! विज्ञहरुका अनुसार प्रकाशले शरीरमा औषधिको रुपमा काम गर्दछ। तर औषधि पनि आवश्यकता भन्दा धेरै लिनु हानिकारक हुन्। यदि रातको समयमा कृत्रिम प्रकाश हाम्रो शरीरमा कायम भईराख्दा त्यसले निश्चित रुपमा शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ। मंगलबार, चैत १५, २०७८
के हाे जनै खटिरा? लक्षण र उपचार जनै खटिरा भाइरसको संक्रमण हो। यसमा ह्युमन हरपिस भाईरसले बिरामीको नसामा संक्रमण गर्दछ। शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा यो संक्रमण देखापर्छ। शुक्रबार, चैत ११, २०७८
बालबालिकालाई पनि हुन सक्छ क्षयरोग, कस्ता बालबालिका जोखिममा? बालबालिकामा फोक्सोको क्षयरोगका साथसाथै एक्स्ट्रा पल्मोनरी अर्थात फोक्सो बाहेक अन्य भागमा लाग्ने क्षयरोग (ग्रन्थि, आन्द्रा, मेनेन्जेस, हाड, प्रजनन तथा मूत्र प्रणाली, छाला, आँखा आदि) पनि हुने गर्दछ। बिहीबार, चैत १०, २०७८
यस्ता छन् क्षयरोगसम्बन्धी पाँच तथ्य जोखिममा पर्ने समूहः क्षयरोगको उच्च सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रमा बस्ने बालबालिका र क्षयरोगी उच्च दरमा रहेका देशमा बस्ने परिवारका मानिस। बिहीबार, चैत १०, २०७८
के हो प्रमाणमा आधारित फिजियोथेरापी सेवा? कुनै क्लिनिक वा हस्पिटलको बिज्ञापनमा टेलिभिजन वा रेडियोमा २-४ जना बिरामीहरूको अनुभव समेटेर अन्तर्वार्ता नै प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। त्यसमध्ये कति सत्य होलान् भनेर ठोकुवा गर्न सकिदैन। बुधबार, चैत ९, २०७८
रेबिज के हो र कसरी बच्ने? बिशेषगरी यो रोगबाट संक्रमित कुकुर, विरालो, मुसा वा जंगली जनावरको टोकाइबाट सर्छ। आइतबार, चैत ६, २०७८
राति भोकै सुत्नुहुन्छ? हुन सक्छन यस्ता असर! तपाई राति भोकै सुत्नुहुन्छ? त्यसो भए ख्याल गर्नुहोस। रातको खानाले हाम्रो शरीरको प्रणालीको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि हामीले यसलाई बेवास्ता गर्यौं भने हामीले गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र निद्रामा पनि गडबड हुन सक्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो दैनिक काम गर्नमा पनि त्यति उत्साही हुन सक्दैनौ। शनिबार, चैत ५, २०७८
यसकारण पर्छ मिर्गौलामा पत्थरी एक चोटि पत्थरी बनेपछि बराबर बनिरहने हुनाले सरल र बिनाझन्झट दैनिक खानामा उचित प्रकारका खाद्यपदार्थ छनोट गर्न सकेमा यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सोमबार, फागुन ३०, २०७८